पहिलोपटक आउने भो सगरमाथाको नयाँ उचाई, के सगरमाथा घटेको होला ? – Pahilo Page
पहिलोपटक आउने भो सगरमाथाको नयाँ उचाई, के सगरमाथा घटेको होला ?
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने टोलीलाई विदाइ
२७ चैत्र २०७५, बुधबार १३:१० 846 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २७ चैत । अबको एक महिनाभित्र संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाई प्राप्त हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथाको उचाई नाप्न जान लागेको कर्मचारीको टोलीलाई आज विदाइ गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट चारजना कर्मचारीको टोली आज त्यसतर्फ जाँदैछ । टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतम, नापी अधिकृत रबिन कार्की, सर्भेक्षक सुरजसिंह भण्डारी र अमिन युवराज रहेका छन् । टोलीले करिब एक महिनामा सगरमाथाको उचाई नापेर फर्कने योजना छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान आयोजित शुभकामना तथा विदाइ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको तर्फबाट पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ नाप्न लागिएकाले यस टोलीको प्रतिवदेन आधिकारिक हुने बताए । “नेपाल सरकारको तर्फबाट पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन हुँदैछ । तपाईंहरुले सेन्टीमिटरसहितको उचाइ नापेर ल्याउनु होला”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “तपाईंहरुले ल्याएको नाप नै सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हुनेछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले टोलीलाई लक्ष्य हासिल गर्नका लागि शुभकामना दिए । तर मौसम र स्वास्थ्यलाई भने ख्याल गर्न प्रधानमन्त्रीले सुझाए । “लक्ष्यमा अडिग रहनुहोस तर स्वास्थ्यले साथ दिएन वा मौसम प्रतिकूल भयो भने जिद्धी नगर्नुहोस । सगरमाथा त्यहीं हुन्छ । अर्कोपटक गएर नापेर आए हुन्छ” प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, “गाइडको निर्देशन पालना गर्नुहोला ।”
सरकारको तर्फबाट सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य ऐतिहासिक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । विदाइ कार्यक्रममा मन्त्री पद्मा आर्याल पनि थिइन् । सोही कार्यक्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रादेशिक विभाजन अनुसारको नेपालको प्रशासनिक नक्सा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।